*Ukungena kwaBucala* Kufuphi neDolophu!
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe onguTatiana
Igumbi elingaphantsi eligcweleyo elinomnyango wabucala, i-smart-lock, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, kunye nokukhanya kwendalo okukwi-Historic Pigtown/Washington Village.
- 5 imizuzu ukusuka Downtown, Inner Harbour, izibhedlele, iiyunivesithi, iziko inkomfa.
- Umgama wokuhamba ukusuka kumabala emidlalo kunye nezothutho.
-Indawo yokupaka yasimahla kunye neninzi yesitrato.
- I-Wi-fi yasimahla.
- Indawo ekhuselekileyo.
-Indawo egqibeleleyo yokuya kubafundi okanye iingcali.
*Ngenxa yeCoronavirus, sithatha inyameko eyongezelelweyo yokubulala iintsholongwane kwindawo ehlala iphathwa phakathi kogcino.*
- Umatrasi kaKumkanikazi okhululekileyo
- Indawo yokupaka yesitalato eyaneleyo (yasimahla).
-Ngena kwiNetflix okanye ezinye ii -apps ngeChromecast kumabonwakude oxhonywe kwiscreen esisicaba.
-Ifriji encinci yobuqu, ikofu, imicrowave.
- Ukuhlamba ekhoyo $5 / umthwalo.
-Ikhitshi liyafumaneka kwiindwendwe ezihlala ngaphezulu kweveki.
- Indawo yokusebenzela ekhoyo kwisakhiwo esingaphaya kwesitalato ngentlawulo yenyanga.
Yaziswa ukuba le yindawo engaphantsi egqityiweyo kwaye isilingi inokuziva iphantsi kakhulu ukuba umde (ngaphezulu kwe-6ft).
Indawo elungiselelwe ukusebenza: idesika, isitulo saseofisini, isikrini sekhompyutha
Imbali yePigtown/Washington Village. Ukuhamba umgama ukusuka kwisitalato esikhulu kunye neevenkile eWashington Blvd.
-BWI Airport 8.9mi (13 min drive)
- Univ of Maryland Medical 0.7 mi (16 min ukuhamba, 6 min drive)
- Isibhedlele saseMedStar Harbour 2.5 Miles (8 min)
- Iziko lezoNyango leNceba 2.1 mi (10 min drive)
- Isibhedlele saseJohns Hopkins 3.1 Miles (13 min drive)
IYunivesithi yaseMaryland, eBaltimore 0.8 (imizuzu eyi-16 yokuhamba, i-4 min drive)
- IYunivesithi yaseJohns Hopkins 3.5 yeemayile (14 min drive)
- IYunivesithi yaseLoyola 5.3 mi (19 min drive)
-Morgan State 6.3 mi (22 min drive)
Indawo endihlala kuyo ePigtown/Washington Village ikhuselekile. Andinayo nayiphi na imiba kodwa, njengaso nasiphi na isixeko, kufuneka uhlale uphaphile.Sihamba umgama oya eWashington Blvd, kwiSitalato esiPhambili kunye neevenkile zasekhaya kunye neeresityu.
Kukho ngaphandle kweeKHAMERA ngaphambili nangasemva.Umnyango womgangatho ophambili ukhuselekile kwaye wothukile.
Indawo yokupaka isimahla kwaye ngokuqinisekileyo ingcono kuneendawo ezininzi zasedolophini.Phantse ndihlala ndipaka kanye phambi kwendlu. Kukho isakhiwo esikhulu sokusebenzisana ngaphesheya kwesitrato ukuze kube nzima i-M-F 9a- 5p kodwa ngenye indlela isitrato sonke sifumaneka ngokupheleleyo. Okona kubi kunokufuneka upake ibhloko emini.
Ndihlala phezulu kwaye ndingaphakathi / ngaphandle imini yonke. Qhagamshelana nam ngetekisi ukuba ufuna nantoni na.
Inombolo yomthetho: STR- 935658